These getting started guides will help you set up and become familiar with your products and services. These guides are in the Adobe® PDF format and require Adobe Reader® to open and print them. You can download Adobe Reader at Adobe ကယ့်ဝဘ်ဆိုဒ်.
Network Solutions မှစ. လွှဲပြောင်းဒိုမိန်း
eNom မှစ. လွှဲပြောင်းဒိုမိန်း
Tucows Reseller များ မှစ. လွှဲပြောင်းဒိုမိန်း
မဲလ်ဘုန်းမြို့အိုင်တီ မှစ. လွှဲပြောင်းဒိုမိန်း (ခေါ်တွင်အင်တာနက်အမည်များကမ္ဘာတစ်ဝန်း)
Dotster မှစ. လွှဲပြောင်းဒိုမိန်း
Register.com မှစ. လွှဲပြောင်းဒိုမိန်း
directNIC မှစ. လွှဲပြောင်းဒိုမိန်း
Gandi မှစ. လွှဲပြောင်းဒိုမိန်း
iHoldings မှစ. လွှဲပြောင်းဒိုမိန်း, Inc မှ. (ခေါ် DotRegistrar)
ကြှနျုပျတို့ကိုသင်၏ Hosting ရွှေ့ပြောင်းခြင်း
သင့်ဆိုက်ကို Upload လုပ်ပါမှ Windows XP ကိုအသုံးပြုခြင်း
သင့်ဆိုက်ကို Upload လုပ်ပါမှ Windows Vista ကအသုံးပြုခြင်း
Plesk အသုံးပြုခြင်းသင့် Linux ကိုဆကျကပျဆာဗာနှင့်အတူစတင် 7.5
Plesk အသုံးပြုခြင်းသင့် Linux ကိုဆကျကပျဆာဗာနှင့်အတူစတင် 8.0
Plesk အသုံးပြုခြင်းသင့် Linux ကို Server ကိုအတူစတင် 9.2
အထက်ရှိ cPanel ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့ Linux ကို Server ကိုအတူစတင်
ရိုးရှင်းသော Control Panel ကိုအသုံးပြုခြင်းသင့် Linux ကို Server ကိုအတူစတင်
Plesk သုံးပြီး Windows Server ကိုအတူစတင်
Parallel အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း Panel ကိုအသုံးပြုခြင်းသင့်ဆာဗာနှင့်အတူစတင်
Plesk အသုံးပြုခြင်းသင့် Linux ကို Virtual dedicated server နှင့်အတူစတင် 7.5
Plesk အသုံးပြုခြင်းသင့် Linux ကို Virtual dedicated server နှင့်အတူစတင် 8.0
Quick Start Guide — သင့်ရဲ့ Assisted ဝန်ဆောင်မှုစီမံကိန်းဆကျကပျဆာဗာ Up ကိုချိန်ညှိခြင်း
Quick Start Guide — သင့်ရဲ့ Assisted ဝန်ဆောင်မှုစီမံကိန်းရဲ့ Virtual dedicated server Up ကိုချိန်ညှိခြင်း
ဆိုက်ကို Analytics မှ
Archives Select Month March 2013 နိုဝင်ဘာလ 2012 ဒီဇင်ဘာလ 2011 ဇွန်လ 2011 ဧပြီလ 2011 March 2011 ဒီဇင်ဘာလ 2010 အောက်တိုဘာလ 2010 ဇူလိုင်လ 2010 ဧပြီလ 2010 March 2010 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2010 စက်တင်ဘာလ 2009 သြဂုတ်လ 2009 ဇူလိုင်လ 2009 မေ 2009 0
Registration ofadomain name has never been easier or more affordable. Live Hoster provides စျေးပေါဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင် with world class support.